Sashalin – Page 106 – News & Entertainments
ဘဝ ဆိုတာအမြဲတမ်း ပုံသေမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အတိတ်က ရှေးကုသိုလ်တွေအကျိုးကြောင့် လက်ရှိဘဝမှာ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲနေပါစေ၊ အကျိုး တန်ပြန်သက်ရောက်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျောင်းစောင့်ဘဝကနေ သိတ်း ၁၅၀၀၀ ပိုင်ရှင်တောင်ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ (၇) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ၁၅၀၀၀ ဆုကိုတော့ မော်လမြိုင်မြို့ ငန်းတေးရပ် အထက […]
ပညာရှိ ခင်ပွန်း ကို ဇနီး က လွှမ်းမိုး တယ် ပညာမဲ့ ခင်ပွန်း က ဇနီး ကို လွှမ်းမိုး တယ် ဆို တဲ့ စာလေးတွေ့ မိလို့ပါ !!!
သူ့အဓိပ္ပါယ်ကိုတိုက်ရိုက်တွေးရင် တစ်မျိုးကြီးပါ…ယောက်ျားနိုင်တဲ့ မိန်းမ… မိန်းမနိုင်တဲ့ယောက်ျား ဆိုတာမျိုးပေါ့…… စာရဲ့အဓိပ္ပါယ်အမှန်က အဲ့ထက်လေးနက်ပါတယ်… လေးလေးနက်နက်တွေးရင် အကြင်လင်မယားဆိုတာ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်နိုင်ဖို့မှမဟုတ်ဘဲ…… ကျွန်မရဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေဆိုရင် အများအမြင်မှာ မေမေက နိုင်တယ်လို့ထင်ကြပါတယ်…. တကယ်တမ်းပြောရရင် ကျွန်မဖေဖေက တမင်အနိုင်ပေးထားတာပါ… ဖေဖေဟာ မေမေစိတ်မချမ်းသာမယ့်ကိစ္စမျိုး မလုပ်သလောက်ကို မေမေ့အပေါ်ချစ်ခင်ပါတယ်… စကားများတာမျိုးဆိုရင်တောင် မေမေကသာ အော်ချင်အော်လိုက်မယ် ။ […]
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် 2019နှစ် (9) လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟောစာတမ်း
တနင်္ဂနွေသာသမီးများအတွက် … အလွန်ကံကောင်းတိုးတက်သော လ, တစ်လ ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ အိုးအိမ် အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စအားလုံး ကံကောင်းမှုများ ခံစားရမည်။ အိမ်တိုက်ခန်း ၀ယ်ရန် ကြံစည်ထားသူများ အကြံအစည် အထမြောက်အောင်မြင်မည်။ အိုးသစ်အိမ်သစ်ဝင်ကိန်း ရှိသည်။ အလုပ်သစ်အကိုင်သစ်များလည်း ၀င်ရောက်နိုင်သည်။ နာမည်တစ်လုံးဖြင့် အသက်မွေးသူများ နာမည်ကျော်ကြား လူသိများမည့် […]
မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် တို့အတွက် စိုးရိမ်စရာ မိုးလေဝသ အခြေနေကိုပြောလာတဲ့ ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်
သြဂုတ်လ အစမှာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်း ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခဲ့ပြီး ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန် ပြည်နယ် ၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ အချို့မြို့နယ်တွေမှာ ရေကြီးခဲ့ပြီး ရေဘေးအန္တရယ်ကျရောက်ခဲ့တာ အားလုံး အသိပါပဲ။ ရေဘေးတင် မကပဲ မြေပြိုမှုတွေပါ ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် လူပေါင်း […]
သွေးရောင်လွှမ်းတဲ့ရေတွေကြောင့် ဒေသခံတွေ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုဖြစ်ခဲ့ရ
ပတ်ပွာ နယူး ဂူနီရာ ဒေသမှာရှိတဲ့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ဟာ သဘာဝအတိုင်း ရေအရောင်ကနေ သွေးနီရောင်တွေအဖြစ်ကို ပြောင်းသွားတဲ့အတွက် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေဟာ အတော်လေးကို စိုးရိမ်နေကြပြီး၊ ကြောက်လန့်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပင်လယ်ရေတွေဟာ အနီရောင်တွေဖြစ်လာတဲ့အပြင် နဂိုကတစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဘူးတဲ့အပေါ် သွေးတွေလို့ ယူဆခဲ့ပါတယ်။ Asia one သတင်းဌာနရဲ့ အဆိုအရ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ […]